सस्तिँदो शेयर बजार, लगानीको अवसर
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा शेयरको भाउ ओरालो लाग्दै केही थामिदै पुन ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । नेप्से एक हजार ५०० नजिकको बिन्दु नजिक आइपुगेको छ । आइतबार मात्रै नेप्सेमा झण्डै ३४ अङ्कको गिरावट आएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को मुनाफाबाट प्रतिफल दिने घोषणासँगै दर्ता किताब बन्दको मितिपश्चात् कम्पनीको समायोजन मूल्यका कारण कतिपय बैङ्क वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सस्तिएको असर पनि बजारमा परेको छ जसले लगानीकर्ता बजार घट्दो छ भन्ने मनस्थितिमा रहेका कारण पनि बजारमा गिरावट देखिएको हो । तर यही मौका छोपेर शेयर खरिद पनि लगानीकर्ताले उच्च पारेको कारण कारोबार भने उच्च नै रहेको छ ।
शेयर बजारमा वर्चस्व भएको बैङ्क तथा वित्तीय सस्था तथा बीमा समूहको शेयरको स्वामीत्व लिएका लगानीकर्ताहरू सम्बन्धित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा बीमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने भएको कारण हकप्रद शेयरमा लगाउनुपर्ने रकमको जोहोमै निकै व्यस्त हुन थालेको अवस्था हो अहिले । हकप्रद शेयरका लागि रकमको व्यवस्था र नजिकिँदो चाडबाडका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान गएको देखिँदैन । गत हप्ता नेप्सेमा कारोबार रकममा झण्डै ३३ प्रतिशतको गिरावट आउनुले यस तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । दोस्रो बजारमा शेयरको भाउ सस्तो भएको छ तर शेयर खरिद गर्ने रकम जोहो गर्न भने निकै गाह्रो पर्दै गएको छ । बजार ओरालो लागेको बखत तरलता सहज भयो, शेयर कर्जा खुल्यो अनि सहजै पाइन थाल्यो भन्ने जस्ता समाचारले बजार केही थामिने र दोस्रो बजारमा शेयरको माग केही बढ्ने अवश्य पनि गरेको छ । शेयर कर्जा लिनु त्यति सरल अवश्य पनि छैन । बैङ्क वित्तीय संस्थासँग तरलता सहज भएको भनिएको अहिलेको अवस्थामा शेयर कर्जा ठूला लगानीकर्ता लक्षित छ । शेयर धितो राखेर मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा पाइने त्यसमा पनि निश्चित कम्पनीको धितो मात्र स्वीकार गरिने अनि कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकै कारण कर्जा लिएर लगानी गर्नु साना लगानीकर्ताका लागि हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था कायमै छ । ठूला लगानीकर्ताले कर्जाको रूपमा ठूलो रकम लिने ब्याजदर पनि कम हुने भएकोले आउँदा केही महिना भित्रमा बजारमा शेयरको माग बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । के शेयरको उच्च आपूर्तिको तुलनामा शेयरको माग पर्याप्त छ ? त्यो भने मननयोग्य विषय हो । अनि ठूला लगानीकर्ता अन्य धेरै व्यवसायमा सलग्न रहेको लगानीकर्ता जो शेयरले दिने प्रतिफलभन्दा कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजदरमा घाटा खाएरै भए पनि केही समय धान्न सक्षम हुन्छन् । त्यस्ता लगानीकर्ताले मात्र बजारमा हाल गरेको लगानीले कमाउन सक्छ तर साना लगानीकर्ताका लागि शेयर कर्जा लिन नै फलामको च्यूरा चपाउनेसरह छ । त्यसमाथि पनि कर्जाको चर्को ब्याजदर जसको तुलनामा शेयरले दिने प्रतिफल हाल लगानी योग्य देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्ता बजारमा एकाएक आउने सम्भावना न्यून नै देखिन्छ ।
आगामी केही महिना शेयर बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा समूहको शेयरको आपूर्ति अझै उच्च मात्रामा हुने देखिन्छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन तथा त्यसको सूचीकरणमा केही कमी आएको भए पनि हकप्रद तथा बोनस शेयरले आपूर्ति ह्वात्तै बढाउने निश्चित छ । त्यसको अतिरिक्त शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको बैङ्क तथा वित्तीय समूहको शेयरमा चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिफलको रूपमा धेरै संस्थाले नगद लाभांश मात्र दिने देखिन्छ । आफ्नो बैङ्किङ व्यापार विस्तार गरेका केही बैङ्क वित्तीय संस्थाले नगद लाभाशंको अतिरिक्त बोनस शेयर पनि दिने आशा गर्न सकिए पनि धेरैले नगद लाभांश मात्र दिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपमा बैङ्क ब्याजदर अझै उच्च पाइने परिस्थिति विद्यमान रहेका बेला शेयरमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफलको रूपमा आएको नगद लाभांश लगानीकर्ताका लागि खासै लाभदायी नहुने स्पष्ट छ । शेयरमा पुरानो समयदेखि खेलेका खेलाडीले मात्र निक्षेपमा बैङ्कले दिने ब्याजदरको पर्वाह नगरी शेयरमा नै लगानी टिकाएर बस्ने गरेको देखिन्छ ।
हाल बजारमा देखिएको शिथिलता र शेयरको आपूर्ति बढने क्रम अझै केही महिना जारी हुने निश्चित छ । त्यसले गर्दा बजारमा अझै ठूलो करेक्सन पनि आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन यस्तो अवस्थामा शेयरमा भएको लगानी आफ्नो बचतबाट भएको छ भने त्यस्ता लगानीकर्ता केही घाटा खाएर भए पनि टिक्लान तर चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर शेयरमा गरेको लगानी अझै अनुत्पादक हुनसक्छ ।
हाल बजार ओरालो लागेका बखत म्युचुअल फण्डहरूको बैङ्कमा रहेको खाताबाट पैसा बाहिर जादैछ भन्ने समाचार पनि हिजोआज सुनिन थालेको छ । म्युचुअल फण्ड भनेको पनि जनताकै लगानीमा खुलेको संस्था हो । उनीहरूसँग भएको नगदको फाइदा लिने सुअवसरको रूपमा फण्डले शेयर बजारमा अहिले लगानी गरेको हुनसक्छ । फण्डले हाल गरेको लगानीले बजारमा देखिएको शेयरको अत्यधिक आपूर्तिलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ तर नेपालमा सञ्चालित म्युचुअल फण्डसँग हाल आपूर्तिमा आएको ठूलो मात्राको शेयर सबै खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ ? त्यो भने देखिँदैन । म्युचुअल फण्डले कर्जा लिइरहनु पर्दैन । जनताबाट उठाएर जम्मा भएको बैङ्कमा रहेको पुँजी शेयर बजारमा सस्तिएको वर्तमान अवस्थामा लगानी गर्नु नौलो कुरा भएन । फण्डहरूले यसरी नै कमाएर आफ्नो एकाइ खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने हो । तर बजारमा देखिएको उच्च आपूर्तिलाई धान्न सक्ने खालको ठूला फण्ड नहुनुले बजारमा कस्तो नकारात्मक असर पार्नसक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।
सरकार र नियमनकारी निकायले बजार सुधारको दिशामा प्रतिबद्धता जनाएको कार्य गर्न नसक्नु वा ढिलाइ गर्नुले पनि बजारमा नकारात्मक असर पारको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्याकारी अधिकृत तत्काल नियुक्त हुन नसक्नु, ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ कार्य सुरु गराउने व्यवस्था लागू नहुनु, बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्योलमा हुनु, गैरआवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा लगानी गराउने वातावरण निर्माण नहुनु, अनलाइन टेडिङ सुरु गर्ने कुरा कछुवाको गतिमा अघि बढ्नुजस्ता विषयले पनि बजारको सुधारमा बाधा पु¥याएको देखिन्छ ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तासँग समन्वय र छलफल गरी बजार सुधारका काम अघि बढाउनुको सट्टा हकप्रद शेयर र साधारण शेयरलाई थप स्वीकृति प्रदान गर्दै बजारमा आपूर्ति बढाउनमा नै व्यस्त भएको अवस्था हो अहिले जसले बजार अझै ओरालो लाग्न मद्दत नगर्ला भन्न सकिन्न ।
वर्तमान शेयर बजारमा साधारण र साना लगानीकर्ताले के गर्ने त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाको शेयर निकै सस्तिएको चाहिँ पक्कै हो तर यो अवस्था अझ कति लम्बिन्छ । अझ कति बजार ओरालो लाग्छ भन्ने भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा आफ्नो बचत लगानी गर्ने अहिले सुअवसर भने पक्कै हो । लगानीकर्ताले आफूसँग भएको बचत एकै पटक होइन सानो सानो परिणाममा शेयर खरिद गर्न लगाउनु उपयुक्त हुनसक्छ । बैङ्क ब्याजदर उच्च छ भनेर बस्नेले ब्याजदर मात्र प्राप्त गर्ने हो । तर शेयर बजारमा निश्चित ब्याजदर भन्दा पनि प्रचुर मात्रामा सम्भावना हुन्छन् त्यसको लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित नहुने हो भने लगानी गने आँट गर्नुपर्छ । तर लगानी गर्दा आफ्नो कर्जा लिनसक्ने क्षमता बजार अझ घट्दा धानिन सक्ने क्षमता र केही समय घाटा खाएरै भए पनि बस्न सक्नेले मात्र बजारबाट कमाउन सक्ने देखिन्छ । शेयर बजार भनेकै धैर्य गर्ने बजार भएकोले बजारमा लगानी गर्नेले अझै लामो समय धैर्य गर्दै लाभ लिने अवसरको सदुपयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।